Kristianisma - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fivavahana kristiana)
Sarin' ny hazo fijaliana, iray amin' ireo famantarana ny kristianisma
Ny kristianisma dia finoana abrahamika mino an' Andriamanitra tokana, izay mifototra amin' ny soratra navelan' ny apôstôly (evanjely na filazantsara) mikasika ny fiainan' i Jesoa avy any Nazareta, na Jesoa Kristy. Roa arivo taona taorian' ny nahafatesany, dia miisa maherin' ny 2 400 000 000 ny mpino tamin' ny taona 2015, miparitaka anaty antokom-pangonana miisa 33 000 any ho any; ka ny lehibe indrindra amin' izy ireo dia ny Fiangonana katôlika.
Niisa 2 355 000 tapitrisa ny Kristiana maneran-tany tamin' ny taona 2013, ka ny 1 200 000 tapitrisa Katôlika, ny 440 tapitrisa Prôtestanta, ny 280 tapitrisa Ôrtôdôksa, ny 92 tapitrisa Anglikana, ny 370 tapitrisa Kristiana tsy miankina, ary ny 38 tapitrisa Kristiana hafa.
Ny mpamaritra anarana kristianina dia midika hoe "an' i Kristy", na "mpanaraka ny fampianaran' i Kristy". Io mpamaritra io dia nomena ny mpanaraka ny fampianaran' i Kristy nanomboka tamin' ny taonjato voalohany.
Ny Testamenta Taloha miaraka amin' ny Testamenta Vaovao no soratra ifotoran' ny finoana kristianina.
1.1 Ny Baiboly
1.3 Fanekem-pinoana sy ny Trinite
1.4 Ny sakramenta na ôrdônansa
1.5 Ny teôlôjia kristiana
2.2 Lasa fivavaham-panjakana
2.4 Ny kroazada
2.5 Fisarahan' ny Andrefana sy ny Atsinanana
3 Sampan' ny kristianisma
3.1 Ny katôlisisma
3.1.1 Ny fiangonana latina
3.1.2 Ny fiangonana katôlika tatsinanana
3.2 Ny fiangonana ôrtôdôksa
3.2.1 Fiangonana ôrtôdôksa tatsinanana
3.2.2 Fiangonana ôrtôdôksa teoahedo
3.2.3 Fiangonana ôrtôdôksa manaraka fomba tandrefana
3.2.4 Fiangonana ôrtôdôksa atsinanana
3.3 Ny prôtestantisma
3.3.1 Ny anglikanisma
3.3.2 Ny kalvinisma
3.3.3 Ny loteranisma
3.3.4 Ny adventisma
3.3.5 Ny anabatisma
3.4 Ny evanjelisma
3.4.1 Ny batisma
3.4.2 Ny pentekôtisma
3.4.3 Ny fihetsiketsehana karismatika ara-pilazantsara
3.4.4 Ny fihetsiketsehana karismatika vaovao
3.4.5 Ny kristianisma tsy manavaka fiangonana
3.5 Kristianisma hafa
3.5.1 Ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany
3.5.2 Ny Vavolombelon' i Jehovah
Fampianaram-pinoana[hanova | hanova ny fango]
Fanekem-pinoana sy ny Trinite[hanova | hanova ny fango]
Ny sakramenta na ôrdônansa dia fombam-pivavahana inoana fa naorin' i Jesoa Kristy ary nampitandreminy ny Fiangonana mba hampitana sy hanomezana ny fahasoavan' Andriamanitra, izay sady famantarana (na tandindon') ny fihavanana eo amin' Andriamanitra sy ny olombelona no fitaovana ahatongavana amin' izany, famantarana atao hanomezana sy hampitomboana ny fahasoavana izay manamasina ny mpino. Roa ny isan' ny sakramenta iraisan' ny fiangonana kristiana rehetra, dia ny batisa sy ny eokaristia, fa miampy dimy izany ao amin' ny Fiangonana katôlika sy ny Fiangonana ôrtôdôksa, dia ny kônfirmasiona, ny sakramentan' ny fampihavanana, ny fanosorana ny marary, ny fanambadiana, ary ny ordinasionan' ny pretra.
Ny teôlôjia kristiana[hanova | hanova ny fango]
Ny teôlôjia kristiana dia andinihana ny Andriamanitry ny Kristiana sy ny fifandraisany amin' ny olombelona eo amin' ny tantaran' ny famonjena, ka ny fara tampony dia ny asa sy ny sorom-panavotana nataon' i Jesoa Kristy. Ireto ny sampana lehiben' izany teôlôjia izany: ny kristôlôjia (izay andinihana ny amin' ny persôna sy ny fampianarana ary ny asan' i Jesoa amin' ny maha Kristy azy), ny antrôpôlôjia kristiana (andalinana ny amin' ny olombelona ny fifandraisany amin' Andriamanitra), ny sôteriôlôjia (andalinana ny amin' ny famonjena), ny pneomatôlôjia (iresahana indrindra ny amin' ny Fanahy Masina sy ny asany ary ny fanomezan' ny Fanahy), ny ekleziôlôjia (andalinana ny anjara asan' ny Fiangonana amin' ny maha vahoakan' Andriamanitra azy eo amin' ny tantaran' ny famonjena ny olombelona), ary ny eskatôlôjia (andinihana ny fiafaran' izao tontolo izao izay atao hoe koa andro farany).
Pentekôsta, sary nataon' i Julius Schnorr von Carolsfeld, 1860
Ny emperora Kônstantino (eo afovoany), sy ireo eveka tamin' ny Kônsilin' i Nikea (taona 325), mihazona ny lahatsoratry ny Fanekem-pinoana nikeana
Taorian' ny fanavaozam-piangonana (refôrmasiôna na refôrma) nataon-dry Lotera sy ny namany izay te hanitsy ny fanao sasantsasany tao amin' ny Fiangonana katôlika dia niforona ny prôtestantisma izay tsy niankina intsony tamin' ny Fiangonana katôlika; avy eo taty aoriana dia niorina koa ireo fiangonana maro atao ankehitriny hoe evanjelika (na ara-pilazantsara) izay miezaka miparitaka eran-tany.
Sampan' ny kristianisma[hanova | hanova ny fango]
Izao ireo sampana lehiben' ny fivavahana kristiana: ireo fiangonana katôlika (izay ahitana ny Fiangonana latina sy ireo fiangonana katôlika tatsinanana miisa 23 toy ny Fiangonana katôlika marônita), ny fiangonana ôrtôdôksa (fiangonana ôrtôdôksa tatsinanana, fiangonana ôrtôdôksa atsinanana, ny Fiangonan' ny Atsinanana), ny prôtestantisma (ahitana ny anglikanisma, ny kalvinisma, ny loteranisma ary ny evanjelisma. Ao koa ireo fiangonana hafa toy ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin' ny Andro Farany sy ny Vavolombelon' i Jehovah.
Ny katôlisisma dia fivavahan' ny Kristiana mankato ny fahefan' ny papa sy ny eveka, indrindra momba ny famolavolana ny foto-pampianarany, ny fampitana sy ny fandaminana ny fanompoam-pivavahany. Ny ankamaroan' ny Katôlika dia ao amin' ny Eglizy latina, nefa ny Eglizy katôlika dia mahafaoka koa ireo fiangonana katôlika tatsinanana miisa 23 izay manan-jo hanao ôrdinasiona pretra lehilahy manam-bady.
Ny Fiangonana latina dia ny ampahany manaraka ny fomba tandrefana ao amin' ny Fiangonana katôlika ka ny Fiangonana katôlika tatsinanana no ampahany mifameno aminy. Amin' ny Fiangonana katôlika rehetra dia izy no lehibe indrindra. Izy koa no lehibe indrindra ao amin' ny Kristianisma tandrefana. Nampiasa ny fiteny latina izy tamin' ny Andro Antenatenany ka hatra taty aoriana fa tsy ny fiteny grika na hafa. Indraindray koa ny Fingonana latina dia mety hantsoina hoe "Fiangonana katôlika rômana" na "Eglizy katôlika romana". Manana ny fehezan-dalàny manokana ny Fiangonana latina, dia ny Lalàna kanônika izay tsy ampiharina amin' ireo Fiangonana katôlika tatsinanana izay manaiky ny fahefan' ny Papa koa.
Ny Fiangonana katôlika tatsinanana dia fitambaran' ireo fiangonana any Atsinanana izay miombona amin' ny Papa ao Rôma sy manaiky ny fahamboniany, nefa izy ireo manao ny fombam-pivavahana tatsinanana. Na dia samy tatsinanana aza dia tsy Fiangonana ôrtôdôksa izy ireo. Atao hoe "Fiangonana oniata" na "Fiangonana katôlika manaraka fomba bizantina" koa izy ireo. Raha ny lafiny fombafombam-pivavahana dia tsy mifanalavitra firy amin' ny fomban' ny kristianisma ôrtôdôksa an' ny Fiangonana katôlika tatsinanana ka izy manaiky ny fahambonian' ny Papa ihany no tsy maha Ôrtôdoksa azy ireo. Anisan' ny Fiangonana katôlika tatsinana ny Fiangonana katôlika marônita, kôpta, armeniana, indiana, grika, eritreana ary etiôpiana. Tsy any Atsinana sy ao Eorôpa Atsinanana ihany no ahitana azy ireo fa nanaraka ireo am-pielezana ka misy any Amerika sy Ôseania ary Eorôpa Andrefana koa.
Ny fiangonana ôrtôdôksa[hanova | hanova ny fango]
Ny fiangonana ôrtôdôksa dia mahafaoka ireo Kristiana monina any Atsinanana Akaiky sy Atsinanana Afovoany indrindraindrindra.
Fiangonana ôrtôdôksa tatsinanana[hanova | hanova ny fango]
Ny Fiangonana ôrtôdôksa tatsinanana na Fiangonana ôrtôdôksa katôlika, izay fantatra indrindra amin' ny anarana fohy hoe Fiangonana ôrtôdôksa, dia iray amin' ireo fiangonana tranainy indrindra. Fiombonam-piangonana ôrtôdôksa maromaro izay samy niorina araka ny Kônsily fito nifandimby izay atao hoe "Fiangonan'ny kônsily fito" izy. Ny ankamaroan' ny Fiangonana ôrtôdôksa tatsinanana dia hita ao Eorôpa Andrefana sy ao Grisia (na Gresy) ary ao Kaokazy.
Fiangonana ôrtôdôksa teoahedo[hanova | hanova ny fango]
Ny Fiangonana ôrtôdôksa etiôpiana na Fiangonana ôrtôdôksa teoahedo etiôpiana dia fiangonana antekalkedôniananiforona tao Etiôpia, mahaleo tena hatramin' ny taona 1959, izay miombona ao amin' ny Fiangonan'ny kônsily telo. Isan' ny fiangonana kristiana tranainy indrindra maneran-tany izy satria efa niforona tany amin' ny taonjato faha-4.
Ny Fiangonana ôrtôdôksa teoahedo eritreana dia fiangonana antekalkedôniana mahaleotena. Miombona ao amin' ny Fiangonan'ny konsily telo izy. Teo ambany fahefan' ny Fiangonana etiopiana ôrtôdôksa io fiangonana io taloha nefa nifarana tamin' ny taona 1993 izany rehefa nahaleo tena izy.
Fiangonana ôrtôdôksa manaraka fomba tandrefana[hanova | hanova ny fango]
Ny Fiangonana ôrtôdôksa manaraka fomba tandrefana dia tsy isan'ny Fiangonana ôrtôdôksa tatsinanana na ny Fiangonana ôrtôdôksa atsinanana.
Fiangonana ôrtôdôksa atsinanana[hanova | hanova ny fango]
Ny Fiangonana ôrtôdôksa atsinanana, izay fantatra koa amin' ny anarana hoe Fiangonana tsy kalkedôniana na Fiangonana tsy kalsedôniana, dia ireo fiangonana kristiana tranainy niorina araka ny Kônsilin' i Nikea (taona 325) sy ny Kônsily voalohan' i Kônstantinôpôly (taona 381) ka indraindray atao hoe Fiangonan' ny kônsily roa na Fiangonan'ny kônsily telo. Tsy isan' ny Fiangonana ôrtôdôksa atsinanana izany ireo atao hoe Fiangonanan' ny kônsily fito, izany hoe ny Fiangonana ôrtôdôksa tatsinanana.
Ny prôtestantisma dia mahafaoka ireo fiangonana nipoitra mivantana na tsia amin' ny Refôrmasiona (na Refôrma) ka mizara ho sampany maro (toy ny adventisma, ny anabatisma, ny anglikanisma, ny fiangonana batista, ny fiangonana nohavaozina, ny loteranisma, ny metôdisma, ny pentekôtisma sns). Ireo fiangonana ara-pilazantsara (ny batisma, ny pentekôtisma, ny fihetsiketsehana karismatika ara-pilazantsara, ny fihetsiketsehana karismatika vaovao, sns) dia indraindray atao hoe anisan' ny Prôtestanta nefa indraindray koa lazaina hoe sampana manokan' ny kristianisma.
Ny anglikanisma dia fivavahana kristiana niorina voalohany tao Angletera vokatry ny fialany avy amin' ny Fiangonana katôlika tamin'ny taona 1534. Any amin'ireo firenena miteny anglisy no tena ahitana azy, indrindra ireo zanatany britanika taloha. Miisa eo amin’ ny 85 000 000 eo ny mpino ao aminy. Raha any ivelan'ny Fanjakana Mitambatra dia "episkopaliana" no ahafantarana io fiangonana io. Eo anelanelan’ny katolisisma sy ny protestantisma ny anglikanisma izay milaza ny tenany ho sady katôlika no nohavaozina.
Ny kalvinisma[hanova | hanova ny fango]
Ny kalvinisma dia foto-pampianarana teôlôjika prôtestanta sy fomba fijery ny fiainana kristiana izay mifototra amin' ny fiandrianan' Andriamanitra amin' ny zavatra rehetra. Ankehitriny dia ilazana ny foto-pampianarana sy ny fanaon' ny fiangonana nohavaozina sy presbiteriana ary kôngregasiônalista izany.
Ny loteranisma dia fiangonana manaraka ny teôlôjia nipoitra avy amin' ny fandinihana sy soratr' i Martin Lotera. Betsaha fiangonana loterana maro ny any Alemaina sy any Skandinavia (Danemarka, Norvezy, sns.), ny any amin'ny faritra na firenena hafa toa an'i Alzasa, i Lorena, i Madagasikara, i Namibia, i Polonia ary ireo firenena balta.
Ny adventisma dia hetsika ara-pinoana kristiana milenarista nanomboka tamin' ny taonjato faha-19 tamin' ny fotoana nampiroborobo ny fifohazam-panahy lehibe faharoa tao Etazonia izay mampianatra momba ny Fiavian' i Jesoa Kristy fanindroany izay hiseho tsy ho ela amin' ny andro farany. Ny tena be mpanaraka indrindra dia ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito.
Ny anabatisma[hanova | hanova ny fango]
Ny anabatisma dia firehana prôtestanta manandratra avo ny batisa an-tsitrapon' ny olona efa tonga saina. Anisan' ny fiangonana batista ny Amisy (alemàna: Amische; anglisy: Amish), ny Hoterita (anglisy: Hutterites ; alemàna: Hutterer), ny Mpirahalahy ao amin' i Kristy (alemàna: Brüder in Christo; anglisy: Brethren in Christ), ny Mpirahalahy Batista Jermanika (anglisy: German Baptist Brethren; alemàna: Schwarzenauer Brüder) ary ny fiangonana menônita maro izay maro anisa indrindra.
Ny evanjelisma[hanova | hanova ny fango]
Ny evanjelisma dia fihetsiketsehana kristiana milaza fa ny Filazantsara (na Evanjely) no hany fototra sy filamatry ny finoany. Nitombo tanjaka nanomboka tamin' ny taonjato faha-18 tamin' ny nipoiran' ny metôdisma britanika sy ny pietisma loterana. Isan' ny matanjaka ao amin' ireo Fiangonana evanjelika ny batisma, ny pentekôtisma, ny fihetsiketsehana karismatika evanjelika, ny fihetsiketsehana karismatika vaovao (na pentekôtisma vaovao) ary ireo kristianisma avanjelika tsy miankina.
Ny batisma dia finoana kristiana nipoitra tamin' ny fifohazam-panahy notarihin' ilay pastora anglisy atao hoe John Smyth tao Hôlandy tamin' ny taona 1609. Io hetsika io dia nanomezany lanja ny Baiboly, ny fahateraham-baovao, ny batisan' ny olon-dehibe, ny fizakan-tena isan-toeran' ny fiangonana, ny fisarahan' ny Fiangonana sy ny Fanjakana ary ny fananan' ny fitambaran' ny mpiara-mivavaka rehetra fahefana (kôngregasiônalisma). Mizara ho antokom-piangonana 27 ny fiangonana batista. Tamin' ny taona 2010 dia niisa 100 000 000 ny mpino batista. Ny ankamaroan' izy ireo dia monina ao Etazonia ka ao izy manjaka tanteraka manoloana ny fiangonana prôtestanta hafa rehetra.
Ny pentekôtisma dia fireham-pinoana vokatry ny fifohazam-panahy notarihin' ny pastora amerikana Charles Fox Parham sy William Joseph Seymour tao Etazonia tamin' ny taona 1906. Io fihetsiketsehana io dia manome lanja manokana ny Baiboly, ny fahaterahana indray, ny batisan' ny Fanahy Masina, ny fanomezam-pahasoavan' ny Fanahy Masina, ny batisan' ny olon-dehibe. Manao fiteny tsy fantatra ny Pentekotista sady mazoto mifady hanina. Araka ny tarehimarika omen' ny Pew Research Center dia miisa any amin' ny 279 000 000 any ho any ny mpino pentekôtista maneran-tany izay hita indrindra any amin' ny firenena any Amerika (Etazonia, Kanada, Brezily, Sily, Nikaragoa, Kôlômbia, Arzantina), any Afrika (Ginea Bisao, Kôtidivoara, Borkina Faso, Benîno, Ganà, Kamerona, Repoblika Demôkratikan' i Kôngô, Repoblikan' i Kôngô, Angôla, Madagasikara, Môzambika) ary any Azia (Sina, Kôrea, Japana, India, Tany Masina).
Ny fihetsiketsehana karismatika evanjelika dia manandratra avo ireo fanomezan' ny Fanahy Masina. Nanomboka tao Etazonia tamin' ny taona 1960 izy io ka nisy akony tao amin' ny fiangonana rehetra na prôtestanta na katôlika na evanjelika ary nandray anjara tamin' ny fiforonan' ny fiangonana evanjelika tsy miankina maro. Tsy manao ny fiteny tsy fantatra ho hany porofon' ny batisan' ny Fanahy Masina izy nefa manome toerana lehibe ny fahasamihafan' ny fanomezam-pahasoavan' ny Fanahy Masina. Araka ny tarehimarika nomen' ny Pew Research Center dia ahitana mpino miisa 305 000 000 io fihetsiketsehana io tamin' ny taona 2011.
Ny fihetsiketsehana karismatika vaovao dia manandratra avo ny fanomezan' ny Fanahy Masina. Nanomboka tao Etazonia tamin' ny fanombohan' ireo taona 1980 izany fihetsiketsehana izany. Maro ireo fiangonana niforona maneran-tany vokatr' io fihetsiketsehana io. Ny batisan' ny Fanahy Masina sy ny fanomezan' ny Fanahy Masina sivy no ivon' ny finoana ao amin' io firehana io. Araka ny tarehimariky ny Pew Research Center tamin' ny taona 2011 dia ahitana mpino miisa 305 000 000 io fihetsiketsehana io.
Kristianisma hafa[hanova | hanova ny fango]
Ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany dia fiangonana kristiana restaorasiônista teraka tany Etazonia tamin' ny taona 1830. I Joseph Smith no mpanorina azy. Ao Salt Lake City any Utah no misy ny foiben-toerany. Amin' ny teôlôjia môrmôna, ny ampahany tsy mety maty amin' ny olombelona, izany hoe ny fanahiny, dia naterak' Andriamanitra Ray. Zanak' Andriamanitra ara-bakiteny ny olombelona sady notezainy mandra-pahalehibeny tao amin' ny fitoerana mandrakizain' ny Ray alohan' ny hiaviany tety an-tany miaraka amin' ny vatana mety maty azo tsapain-tanana. Tsy isan' ny fiangonana trinitariana ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany na dia miresaka momba ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina izay lazainy fa samy Andriamanitra. Ankoatry ny Baiboly dia manana ny boky masiny manokana izy, dia ny Bokin'i Môrmôna sy ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana ary ny Voahangy Lafo Vidy. Manana mpikambana miisa 16 000 000 any ho any io fiangonana io maneran-tany.
Ny Vavolombelon' i Jehovah dia mino ny fitondran’ ny Mesia mandritra ny arivo taona (milenarisma) sy mihevi-tena ho mamerina amin’ ny endriny tany amboalohany ny fivavahana kristiana (restaorasiônista). Nipoitra avy amin' ny fikambanana Bible Students ("Mpianatra Baiboly") notarihin' i Charles Taze Russell izay nandray ampahany betsaka tamin' ny fampianaran' ny adventisma. Amin' ny Vavolombelon' i Jehovah, i Jesoa dia noforonin' Andriamanitra mivantana sady voalohany fa tsy Andriamanitra, ny fanahy masina dia herin' Andriamanitra. Tsy mitambatra ho Trinite ny Ray sy ny Zanaka (Jesosy) ary ny fanahy masina. Tamin' ny taona 2020 dia niisa manodidina ny 8 430 000 ny mpino Vavolombelon' i Jehovah.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristianisma&oldid=1041466"
Voaova farany tamin'ny 12 Desambra 2021 amin'ny 15:36 ity pejy ity.